Ithiphu: ukuphathwa kwenguqulo yedokhumenti ku-MacOS Sierra | Ngivela kwa-mac
Ithiphu: ukuphathwa kwenguqulo yedokhumenti ku-MacOS Sierra
UJavier Labrador | | Izifundiswa
Namuhla siletha okokufundisa okuwusizo okuncane kakhulu singayithola kanjani inguqulo ethile yedokhumenti ukuthi sihlela kuma-mac ethu futhi sifuna ukubuyela esimweni esedlule.
Lapho wenza izinguquko kudokhumenti (igama, phambili, njll, ...) nefayela ligcinwa ngokuzenzekelayo noma ngokuzenzela kwakho, futhi kamuva uyabona ukuthi ususe noma uhlele okuthile okungafanele ukwenze, Kukangaki ufuna ukubuyela emuva esikhathini esidlule, ukuze ususe lonke ushintsho olwenziwe bese ushiya ifayili njengoba belinjalo ngaphambili? Ku-mac yakho kungenzeka futhi lapha sichaza ukuthi:
Kubalulekile ukuthi wazi kuqala ukuthi yini le nto oyisebenzisayo, ngoba kungumsebenzi okufanele usebenze ohlelweni olusebenzisayo. Ngokwesibonelo, Amakhasi, izinombolo, i-Keynote noma i-iBook zinenketho eyakhelwe ngaphakathi. Ngokuphambene nalokho, kuyinto i-Windows Office suite enganikeli ngayo. Isizathu esisodwa sokusebenzisa izinhlelo zokusebenza zomdabu ze-Apple!
Okwenziwa yilomsebenzi ngokuyisisekelo ukuhlola kusixhumi esibonakalayo esifana ne-Time Machine, ukuhamba ngesikhathi ukuze ukwazi ukusesha nokuthola inguqulo yangaphambilini yedokhumende okukhulunywa ngayo. Ake sibone igxathu negxathu ukuthi kufanele sisebenze kanjani ukuthola izinguqulo zangaphambilini zemibhalo yakho:
Ngaphakathi kohlelo olusetshenzisiwe, kubha yemenyu singena Faka kungobo yomlando.
Uma uhlelo lokusebenza luthi lolu khetho lunikwe amandla, inketho izovela Buyela ku -> Dlulisa amehlo kuzo zonke izinhlobo ...
Lapho, izolayisha zonke izinhlobo ezikhona, zihlelwe ngosuku, futhi sidinga kuphela ukukhetha leyo oyifunayo.
Le mibhalo igcinwe ngokufana ngokuzenzakalela zigcinwa enkombeni efihliwe kubizwa:
/ .Ukubukezwa Kwamadokhumenti-V100/,
ezingeni lokuqala le-hard drive. Lo mkhombandlela uyi ukuchitha ngamandla kaningi ngokuqhathaniswa, nosayizi wayo uncike kwinani lamadokhumenti osebenza nawo.
Uma udinga susa okuqukethwe kufoldaUngakwenza ngaphandle kwenkinga enkulu, kepha kufanele ukhumbule ukuthi uzosusa lonke ulwazi lwazo zonke izinhlelo zokusebenza ezisebenzisa lesi sici.
Sethemba ukuthi le thiphu ibilusizo kuwe nokuthi ngale ndlela ungathola amadokhumende owawusunikele ngawo ukuthi ulahlekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ithiphu: ukuphathwa kwenguqulo yedokhumenti ku-MacOS Sierra
I-Apple Watch 2 kufanele incintisane ngqo neGear S3 yakwa-Samsung
Thekelisa umbhalo ku-PDF kusuka kubahleli be-Mac abavamile